प्रतिरोध बोल्छ मेरो उपनिवेशित जिब्रो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १३, २०७७ लुना रञ्‍जित
मलाई पूर्वजहरूसँग जोड्ने
बाँच्नका लागि चाहिने भाषाले
हाम्रा कथाहरू दबाउँदै
हाम्रा स्मृतिका पानाहरू मेटाउँदै
मेरो बालमस्तिष्कमा जरा गाडे
आदेशअनुसार बटारिन नमान्ने जिब्रोले
निर्वासित लेखकहरूको सम्मानमा
हाम्रा बाखं, हाम्रा लुमन्ती ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७७ १२:३३
मंसिर १३, २०७७ हेमन यात्री
‘यात्रीले गोल गर्‍यो आज,’ कुलबहादुरले धेरैपटक दोहोर्‍यायो । ऊ मेरो विपक्षमा थियो । उसले गोलपोस्ट सम्हालेको थियो । मेरा टिमका साथीहरूले धेरैपटक कुलबहादुरको पोस्टमा बल हाने पनि गोल गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
कसोकसो मैले हानेको गोल भने कुलबहादुरले छेक्न सकेन । त्यही एउटा गोलका कारण म्याच हामीले जितेका थियौँ । खेल सकिएपछि कुलबहादुरले निकै बेरसम्म विस्मात मानिरह्यो । उसले धेरैपटक दोहोर्‍यायो, ‘यात्रीले गोल गर्‍यो आज ।’
अहिले लाग्दै छ– कुलबहादुर यति चाँडै जाँदै छ भन्ने थाहा पाएको भए, त्यो गोल मैले हान्ने नै थिइनँ । वा उसले समाउन सक्ने गरी गोल हानेर केही समय खुसी बनाउने थिएँ उसलाई । भलिबल पनि खेल्न रहर गर्थ्यो ऊ । एक दिन भाइहरूले हानेको सटले कुलबहादुरको अनुहारमै लागेर रन्थनियो । कसो ढल्नबाट जोगियो । त्यस दिन, रक्सी पिएर कोडमा बसेको रहेछ ऊ । यति चाँडै जाने छनक पाएको भए, कुलबहादुरलाई जोगाएर खेल्नु भन्न हुन्थ्यो । लुँडो, तास, क्यारेमबोर्डसमेत खेल्न बस्थ्यो ऊ । तर, यी कुनै पनि खेलमा कुलबहादुरले कहिल्यै जितेको याद भएन मलाई । ऊ यती चाँडै जाला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकेको भए, उसलाई जिताउनु हुन्थ्यो हरेक खेलहरूमा । खेलैपिच्छेको हारले, सायद जिन्दगीबाटै हार्दै छु भन्ने अन्दाज पो गरेको थियो कि कुलबहादुरले ?
बाहिरबाट हेर्दा लाग्थ्यो– डराउनुपर्ने खास रोग केही छैन कुलबहादुरसँग । ठीकठाक छ शरीर । तर, बेस्सी नै रक्सी सेवन गर्ने आदत थियो उसको । युरिक एसिडले सताइरहेको उसलाई रक्सी कम गर्न भनेको थिएँ एक दिन । काम गर्नै नमिल्ने गरी हातका औँलाहरू सुन्निएका थिए । हात–खुट्टाका जोर्नीहरू दुख्छ, औषधि गर्छु भन्थ्यो । तर, उसले औषधि गरेन । रक्सी पनि छोडेन । कुलबहादुरले कुनै दिन औषधि गर्ला, रक्सी छोड्ला भन्ने लाग्थ्यो । उसले दुवै गरेन । हुन पनि ऊ ठीकठाक नै थियो । नियमित काम गर्थ्यो, आफ्नोमा, अरूकोमा समेत । लकडाउन अवधिको अघिल्लो चार महिना, म गाउँ बसेर फर्कंदासमेत कुलबहादुर दुरुस्तै थियो ।
गाउँबाट फर्केको केही दिनपछिको एक दिन सुजाले भनिन्, ‘फादर ∕ कुले अङ्कल पनि बित्नुभएछ ।’ अबेरसम्म सुतेर ब्युँझँदा दुई–चार जुवा घाम निस्किसकेको थियो सायद । एउटा गम्भीर दुर्घटनाबाट गुज्रिएर आराम गरिरहेको थिएँ । साँझ चाँडै निदाउने, बिहान अबेर मात्रै उठ्ने दैनिकी बनिसकेको थियो । गएको साउन महिनाको पुछ्रे दिनहरूको एक दिन थियो त्यो । सुजाले हातमा बोकेको मोबाइल स्क्रोल गर्दै कुले अङ्कल बित्नुभएछ भन्ने उसको वाक्यले झस्किएँ म । भर्खरै ब्युँझेको मलाई, कानले धोका दिएको हुन सक्छ ठानेर फेरि स्पष्ट हुन चाहेँ । उही कुरा दोहोरियो– ‘कुले अङ्कल बित्नुभएछ । फेसबुकमा भाइहरूले राख्नुभएको छ ।’ अघिल्लो दिन मात्रै अस्पताल लग्दै गरेको कुरा जीवी काकाले टेलिफोनमा बताउनुभएको थियो । आफैं अस्वस्थ भएको कारण अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था थिएन मेरो । अस्पतालमा केही समस्या भए खबर गर्नुहोला, मैले गर्न सक्ने सहयोग गर्छु भनेर कुरा टुङ्गिएको थियो हाम्रो ।
हतार गरेर फेसबुकको भित्तामा आँखा डुलाउँछु । गाउँमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भाइहरूको वाल सर्च गरेर हेर्छु । कृष्ण, इन्द्र भाइहरूले लामालामा सम्झना र चोटका शब्दहरूसहित फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली दिएको देखियो । लगत्तै अदृश्य भान्जाको वालमा गएँ । भान्जाले आफ्नो बाबाको फोटो राखेर लेखेको रहेछ– ‘बाबा ∕ तपाईंले यति चाँडै छोडेर जानुहोला भन्ने लागेकै थिएन । मलाई तपाईंले सेवा गर्ने मौकासमेत दिनुभएन ।’
छोराले लेखेको श्रद्धाञ्जलीमा थुप्रै कमेन्ट थिए, जसमध्येको एउटा थियो– ‘बूढा हाम्रो भेट हुन नपाई छोडेर गयौ तिमीले । तिम्रो आत्मालाई शान्ति मिलोस् ।’ वषौँदेखि बेखबर बाँचिरहेका लोग्ने स्वास्नीको बोलचालसमेत नभएको कुरा मलाई थाहा थियो । मृत्युपछि स्वास्नीले बोलाई । तर, एकोहोरो । स्वास्नीले बोलाएको कुलबहादुरले सुन्नै पाएन ।
खासमा, कुलबहादुर एक बिन्दास मान्छे थियो । गाउँको मेलापात होस् वा हाटबजार, निस्केपछि दुई–चार दिन घर नआए पनि हुन्थ्यो उसलाई । साथीभाइका लागि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सहजै उपलब्ध हुन्थ्यो । उसले आफ्नो लागि त कति बाँच्यो कुन्नि, त्यो सोध्नै नापाई गयो । कुलबहादुरको त्यो बिन्दासपन उसले बाँचेको जिन्दगीको दिनसम्मै रह्यो । बेलैमा विवाह गरेको ऊ विवाहको केही वर्षपछि भारतको विभिन्न ठाउँ गएर बस्यो । घरपरिवार, श्रीमती र नाबालक छोरो छोडेर गएको ऊ, कैयन वर्ष बेखबर उतै बस्यो । घर व्यवहार सहज होला भनेर परदेश लागेको उसले घरपरिवार नसम्झी वर्षौँ बितायो । धेरैपछि फर्कियो ।
केही समय घर बसेको उसलाई परिवारले फेरि मलेसिया पठायो । तर, कुलबहादुरको बदलिएन । उस्तै रह्यो, बेखबर । यता छोरा हुर्किंदै गयो । दिनदिनै छोराको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको थियो । तर, बाबा कुलबहादुर भने बेखबर थियो । लोग्नेसँग आजित भएर, हुर्किंदै गइरहेको छोरा छोडेर आमासमेत परदेसिई । त्यसयता उनीहरूको भेट भएको थिएन ।
किशोरावस्थामा गरेको सङ्गतबाहेक, कुलबहादुर मेरो स्मृतिबाट धमिलो हुँदै गइरहेको थियो । ऊ मुग्लान पस्दै गर्दा म स्कुल सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा सहर पसिसकेको थिएँ । चाडपर्वमा घर पुग्नुबाहेक, अधिकांश मेरो समय बाहिर बाहिरै बितिरह्यो । आज पनि यो क्रम उस्तै छ । संयोग भनूँ वा दुर्भाग्य, विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले नेपालमा समेत सरकारले लकडाउन घोषण गरिसकेको थियो । केही समय गाउँ गएर बस्ने योजना बनाएँ । गाउँ पुग्दा, वर्षौँ पहिलेदेखि भेट नभएको कुलबहादुर भेटिए । लकडाउन लम्बिँदै गयो । केही दिनलाई गाउँ गएका हामी पुराका पूरा चार महिना बस्यौं । चार महिनाको बीचमा कुलबहादुरसँग फेरि उही पुराना दिनहरू बाँच्यौँ हामीले ।
कुलबहादुरसँग पहिलोपटक कहाँ भेट भएको थियो हाम्रो ? त्यो त म ठम्याउन सक्दिनँ । तर, हरेक वर्षको तिहारमा हुने देउसी भैलो कार्यक्रमका लागि गरिने रिहर्सलको क्रममा, हाम्रो भेट भएको याद छ । अगुवाहरू हामीलाई नाचगान गर्न सिकाउँथे । हामी इमानसाथ आफ्नो भूमिका निभाउँथ्यौं । समयक्रममा त्यो सांस्कृतिक समूहको अघिल्लो लहरमा कुलबहादर र हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्‍यो । देउसीभैलो कार्यक्रम गरी नगद सङ्कलन गर्ने दायित्व हाम्रै पुस्ताका काँधमा थियो । यसरी संकलन गरेको रुपैयाँले सामाजिक गतिविधिमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू खरिद गर्थ्यौँ । नेपाली नयाँ वर्षमा सिर्जनाका अनेकौँ विधामा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुन्थे । महिनौँदेखिको अभ्यासले हामी निपुण भइसकेका हुन्थ्यौँ । प्रतियोगिता भएको दिन, मुख्यमुख्य पुरस्कार हाम्रा पोल्टामा पर्थे । कुलबहादुर मुख्य हिस्सा थियो । नाचगानकै क्रममा कुलबहादुरले बेलैमा विवाह गर्‍यो, छोरो जन्मायो । आज उही छोरा, बुबाको अल्पायुमै भएको मृत्युमा श्रद्धाञ्जली लेख्ने भएको छ ।
आज कुलबहादुर बितेर गएको पुगनपुग चार महिना हुँदो हो । चार महिनापछि कुलबहादुरलाई उसको बुबाले समेत पछ्याएर गइसकेका छन् । लामो समयदेखि क्यान्सरले थलिएका कुलबहादुरको बुबाले समेत मृत्यु रोजेको यो समय, सहरको यो भीडमा बसेर कुलबहादुर, उसका बुबा र शोकले थिचिएका परिवारलाई सम्झेर आफैं दुख्नुबाहेक मसित अर्को बाटो छैन ।
सम्झिरहेको छु– लकडाउनको समय, गाउँमा कुलबहादुरले काम नगरेको घर–बारी कसैको थिएन । ऊ पाककलामा समेत निपुण थियो । कसैको घरमा हौली लगाउँदा, भान्साका लागि कुलबहादुर अनिवार्य हाजिर हुनुपर्थ्यो । गाउँभरि कुलबहादुरले पाककलाको चर्चा हुने गर्थ्यो । सस्याना लाग्ने, तर जान्नैपर्ने त्यस्ता कुरा हुन्छन् जीवनमा । जस्तै : खसी ढालेर बनाउनुपर्‍यो कुलबहादुर चाहिने । राँगा, बङ्गुर फोर्न पर्‍यो, कुलबहादुर चाहिने । घरमा डकर्मीको जरुरी पर्‍यो, कुलबहादुर चाहिने । हुन पनि, स्यानै उमेरमा स्कुल जान छोडेर कुलबहादुर यस्तै जीवनपयोगी सीपहरू सिक्दै हुर्कियो ।
हाम्रो पुस्तामा कुलबहादुरको जस्तो सीप भएको मानिस गाउँमा कोही थिएन भने पनि हुन्छ । कुलबहादुर बितेपछि आमाले सुनाउनुभएको थियो, ‘गाउँमा सप्पैको कोदो रोप्ने खेतालामा कुले आफैँले भात, तिहुन पकाउन सघायो । हाम्रै मैदान बारीमा खेताला लाउँदा पनि, कुले नै भान्से थियो । मर्छजस्तो त कताबाट पनि थिएन ।’ आमाको कुराले मनमा दुःखको आँधी चलिरह्यो । तर, जतिसुकै दुःख, पिरको दहमा डुबे पनि कुलबहादुर फर्किनेवाला थिएन । यतिबेला सोच्दै छु– गाउँमा कुलबहादुरले गर्ने यी तमाम काम कसले गर्दै होला ? गाउँका हरेक मेला पातहरूमा कुलबहादुरको सम्झना हुन्छ/हुँदैन होला ?
कुलबहादुरको मृत्युको भोलिपल्ट गाउँ पुगेँ म । आफ्नै आँगनको डिलमा उभिएर कुलबहादुरको घरतिर हेरेँ । मानिसहरूको चहलपहल थियो । ऊबिनाको त्यो घरमा जाऊँ कि नजाऊँ भयो । म पुग्नु र नपुग्नुले खास माने राख्छजस्तो पनि लागेन । आँगनको डिलमै उभिएर आमालाई कुलबहादुरलाई गाडेको ठाउँ सोधेँ । आँगनमै गाडिएजस्ता पाइलाहरू बिस्तारै सर्न थालेँ ओरालो ।
सिमलको रूखमुनि रहेछ, कुलबहादुरको चिहान । भर्खरै झरी परेर रोकिएको थियो । सिमलको रूखबाट पानीका थोपाहरू झर्थे उसको चिहानमाथि । तर, त्यो बिलाइजान्थ्यो उजस्तै । किशोरकालमा कुलबहादुर पनि सिमलको बोटबाट झर्ने पानीको फोकाजस्तै देखिन्थ्यो । यही सिमलको रूख छेउछाउ हल्ला गर्थ्यो, उफ्रन्थ्यो, खेल्थ्यो । आज सधैँका लागि गायब छ ऊ, सिमलको रूखबाट झर्ने पानीको फोकाजस्तै । चिहाननजिकै केराका नयाँ बोटहरू पाउलिरहेका थिए । लकडाउनको बेला कुलबहादुरले नै रोपेको थियो । अहिले साथी भएछ उसको । चिहानमाथि एक जोर नयाँ जुत्ता रहेछन् । एक जोर चप्पल रहेछन् । सद्दे रहँदा उसले बोकिहिँड्ने खुकुरी र ब्याग पनि रहेछ । सायद भौतिक रूपमा कुलबहादुरसँग भएको कमाइ थियो त्यो ।
मेरो बालसखा कुलबहादुर ∕ अहिले तिमी बोल्दैनौ, थाहा छ । तर, तिमीलाई मुठी माटो दिनुअघि सोध्न मन लागेको छ– तिमीजस्तै मरेको दिन, मेरो चिहानमाथि के–के हुन्छ होला ?
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७७ ११:२८